INkonzo yabaThengi | Shandong Dingtaisheng Oomatshini Technology Co., Ltd.
Ukucwangciswa kwesiza kunye nokwenziwa kwenkqubo
Ngokwemfuno yabathengi, bonelela ngezisombululo ekujoliswe kuzo, ezifanelekileyo zobuchwephesha, izixhobo zokucoca inzala ezixhasa amaziko acwangcisiweyo.
I-DTS ineqela layo emva kokuthengisa, sinokubonelela ngeenkonzo zolondolozo rhoqo kubathengi. Xa izixhobo zakho zinengxaki, iinjineli ze-DTS emva kokuthengisa zinokuchonga kwaye zikukhokele ekusombululeni iingxaki ukude. Xa umthengi engenakukwazi ukuzitshintsha indawo yakhe, iDTS ithembisa ukufika kwisikhululo kwisithuba seeyure ezingama-24 kwiphondo lethu nakwiiyure ezingama-48 ngaphandle kwephondo.
I-DTS inelebhu yokuvavanya. La maziko axhotyiswe ngokupheleleyo ukuvelisa iimeko ezichanekileyo zemveliso yoshishino.
Uya kufumana uncedo kwiingcali zethu zokucoca inzalo kunye neetekhnoloji yokutya, kwaye uya kuba nakho:
Ukuvavanya kunye nokuthelekisa inkqubo yokuhamba kunye nokusetyenziswa (ukujikeleza, ukujikeleza, ukunyikima iinkqubo)
-Zama inkqubo yethu yolawulo
-Seta inkqubo yoxinzelelo (uvavanyo lokugcina kwakhona) luxhotyiswe ngesixhobo sokubala se-F0)
-Vavanya ukupakishwa kwakho ngenkqubo yethu yokuhamba
-Vavanya umgangatho wokutya weemveliso ezigqityiweyo
Ngoncedo lwamaqabane, iiyunithi zovavanyo ziyasetyenziswa kuphuhliso lwezixhobo zeshishini, ezinje ngokugcwalisa, ukutywina kunye neenkampani zokupakisha.
Uvavanyo lweMveliso, uphuhliso lwefomula yobugcisa
Ngaba ufuna ukwenza iresiphi yokulungisa ubushushu?
-Ungumnini webhongo weeDTS Retorts?
-Ngaba uyafuna ukuthelekisa unyango olwahlukileyo kunye nokwenza iiresiphi zakho zokuphelisa inzalo?
-Uphuhlisa uthotho lwemveliso entsha?
-Ngaba ufuna ukutshintsha ukuphakheja okutsha?
-Ufuna ukulinganisa ixabiso F? Okanye ngenxa yaso nasiphi na esinye isizathu?
Bonke abasebenzi bakho banokuxhamla kuqeqesho lokuziqhelanisa nezinto kwiindawo ezahlukeneyo
Ukusetyenziswa kokuziphatha kwakhona, kufanelekile kubaqalayo, abanamava okanye kwinqanaba elithile labasebenzi
Iinkonzo zethu zinokuqhutywa kwindawo yakho okanye kuvavanyo lwe-LABS, eyilelwe ukwamkela abafundi kwaye ibenze bakwazi ukudibanisa ulwazi lwethiyori kunye namava asebenzayo. Iingcali zethu zonyango lobushushu ziya kukunceda kwaye zikukhokele kulo lonke uqeqesho lwakho. Iziphumo zovavanyo kwindawo yakho yokuvelisa imveliso Akukho sigaba sophuhliso esiyekisa izixhobo zakho zorhwebo, ukuvumela ukuba ugcine ixesha, wandise ubhetyebhetye, kwaye uqhubeke nemveliso ngelixa uqeqeshwa.
Ngaphandle koko, sinokwenza zonke iimvavanyo ngokwethu kwilebhu kwaye silandele ingcebiso yakho.Kufuna nje ukusithumela isampulu yemveliso yakho kwaye siya kukunika ingxelo epheleleyo ekupheleni kovavanyo.Lonke ulwazi olutshintshelweyo luphathwa ngendalo luyimfihlo ngokungqongqo.
Uqeqesho kwisityalo sethu
Sibonelela ngoqeqesho kwizityalo (ukugcinwa rhoqo, ukulungiswa kwemishini,
iinkqubo zolawulo nokhuselo ...), umgaqo-nkqubo woqeqesho olungiselelwe ukulungela iimfuno zakho.
Kwilabhoratri yethu, sinokubonelela ngeeseshoni zoqeqesho kubasebenzi bakho abaphendula kwakhona.
Banokubeka kwangoko ithiyori ekusebenzeni ngexesha leseshoni.
Uqeqesho kwindawo yabathengi
Siyayazi indawo yokulungisa izinto, kwaye siyazi ukuba xa izixhobo zisihla, ikudla imali eninzi. Ngenxa yoko, i-DTS isebenzise uyilo olungqongqo kunye namacandelo kubo bonke oomatshini bethu. Nditsho neelebhu zethu kunye noomatshini bophando benziwa ngezinto ezinobungakanani kumashishini. Ngephakheji yethu yolawulo oluphambili, uninzi lwezixhobo zokusombulula iingxaki zinokwenziwa ngombane ngokusebenzisa imodem, nangona kunjalo, xa ufuna inkxaso yezityalo, nkqu neenkqubo zenkxaso ekude kakhulu azikho endaweni yokuba nobuchwephesha be-DTS okanye injineli kwindawo. Abasebenzi bethu banokukunceda ufumane umatshini wakho ubuye usebenze.
● Ukuhanjiswa kobushushu kunye nokungena kobushushu
Kwi-DTS, kubalulekile ukuba sincede abathengi bakhethe indlela efanelekileyo kwaye basebenze nabo ukwandisa ukusetyenziswa, ukusebenza kunye nokugcinwa kwezixhobo. Sisebenza ngokusondeleyo nabagunyazisi beenkqubo zonyango lwangaphakathi kunye / okanye unyango lwangaphandle lobushushu. Inkqubo yabacebisi ukuqinisekisa ukuba i-retort yethu iyasebenza kwaye isebenza ngendlela ekhuselekileyo, efanelekileyo nefanelekileyo.
Ukuba iimveliso zakho ziya kuthunyelwa e-United States, okanye ukuba izixhobo zakho zezokuqala, okanye ukuba i-retort yakho iyalungiswa, kuya kufuneka uhambise ubushushu kunye novavanyo lokungena kobushushu.
Sinezixhobo zonke ezifunekayo kuvavanyo olunje.Sithengile izixhobo ezikhethekileyo zokulinganisa (kubandakanya abagawuli bedatha) kunye nesoftware yohlalutyo lwedatha ukwenza iimvavanyo ngokuchanekileyo phantsi kweemeko ezifanelekileyo ngokweemfuno zakho kunye nokubonelela ngeengxelo zovavanyo olunzulu kunye neenkcukacha.
Ukusukela oko yaqalayo, i-DTS isebenze kumzi mveliso wokulungisa ukutya, ibonelela ngeenkonzo kubaprosesa bokutya okuneasidi ephantsi (i-LACF) kunye neziselo ukubanceda ukuba baseke iinkqubo zemveliso zokutya ezikhuselekileyo kunye neenkqubo. izisombululo zokwenza ubushushu kunye neenkonzo kubathengi abasele bekho kunye nabasasazekayo abasebenza kwihlabathi liphela.
● Ukuvunywa kwe-FDA
Ukuhanjiswa kwefayile ye-FDA
Ubungcali bethu kunye nokusebenza ngokubambisana namaqabane angamazwe aphesheya akhethekileyo kunikezelo lweenkonzo ze-FDA lusenza sikwazi ukulawula ngokupheleleyo olu hlobo lokuthunywa. Ukusukela ekusekweni kwayo, i-DTS isebenze kumzi mveliso wokulungisa ukutya, ibonelela ngeenkonzo kubaprosesa bokutya okuneasidi ephantsi (i-LACF) kunye neziselo ukubanceda ukuba baseke iinkqubo zemveliso zokutya ezikhuselekileyo kunye neenkqubo. izisombululo zokwenza ubushushu kunye neenkonzo kubathengi abasele bekho kunye nabasasazekayo abasebenza kwihlabathi liphela.
Uvavanyo lokusetyenziswa kwamandla
Namhlanje, ukusetyenziswa kwamandla ngumceli mngeni kuwo onke amanqanaba. Uvavanyo lweemfuno zamandla alunakuphepheka namhlanje. Ukusebenza ngokugqibeleleyo, uvavanyo kufuneka lwenziwe kwinqanaba lokuqala leprojekthi.
Kutheni ufuna uvavanyo lwamandla?
Ukuchaza iimfuno zamandla,
-Chaza izisombululo ezifanelekileyo zobuchwephesha (indawo yokusebenza, ubuchwephesha, inqanaba lokuzenzekelayo, ingcebiso yeengcali ...).
Eyona njongo iphambili kukwandisa nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kulo lonke eli ziko, ngakumbi emanzini nakwisiphunga, owona mceli mngeni wokuzinza kule nkulungwane yama-21.
I-DTS iqokelele ubungcali obomeleleyo bokunciphisa iindleko zamandla. Izisombululo zethu zinceda abathengi bethu ukuba banciphise ukusetyenziswa kwamanzi kunye nomphunga.
Ngokokuvavanywa, isikali seprojekthi yokubuyisa, ngokudityaniswa kweyona meko yokusebenza yendawo yabathengi, sinokunika abathengi izisombululo ezintsonkothileyo okanye ezilula.
Tsalela umnxeba +86 536-6549353